Amafutha abalulekile kuyindlela enhle kunazo zonke yokunakekela umzimba wakho. Iphunga elicashile lemvelo eligxile endaweni eyodwa liye lasiza ekuthuthukiseni inhlalakahle yomuntu jikelele kuphela, kodwa futhi yamvumela ukuba azizwe wonke amangqamuzana omzimba wakhe, azizwe ugqozi lwakhe, amandla akhe nokukhululeka.
Phakathi kwamafutha amaningi namuhla, indawo ekhethekile, njengoba njalo, i-opidi yamafutha. Ukusebenza kwayo ezinhlokweni ezihlukahlukene zokuphila, hhayi kuphela kwezokwelapha ne-cosmetology, kuvumela ukufeza imiphumela emihle.
Lokhu okujwayele ukuvela kumnandi webuntwaneni kwasihlangabeza yonke indawo: ekugezeni okugcwala usawoti nge-sweet coniferous iphunga; Emithini yemakhaza yengane nomphimbo; Ngama-lotions esilonda, iphunga le-fir; Esihlalweni sokuhlanza esisha.
Amandla okuphulukisa e-silver fir esiliva
Ukusetshenziswa okunjalo kwezakhiwo ze-coniferous izihlahla empilweni yomuntu akuyona ingozi. Kuyinto enhle ezweni lakithi - indalo yokudambisa kakhulu edumile yemvelo. Ku-fir tree, amafutha abalulekile atholakala ngaphezu kwamanye ama-conifers nezinye izitshalo. Ngaphezu kwalokho, kulula kakhulu ukwenza lokhu. I-Fir ibhekisela kulezo zitshalo ezikhiqiza i-phytoncides - izinto ezakhiwe ezitshalweni ezinomthelela ohlukile - zibulala izinambuzane ezincane, kubandakanya amabhaktheriya ayingozi kubantu.
Yini eyayithatha isakhiwo esihle kakhulu sokuphulukisa izihlahla ze- coniferous futhi ngokwayo imelela yonke into eyinkimbinkimbi ye-phytoncidal? Amafutha afanele amafutha! Ukusetshenziswa kwalo ekwelapheni iziguli ezinzima (umdlavuza) kuvunyelwe ukumisa ukukhula kwesisu. Futhi uma amafutha abalulekile ephumelela kakhulu ezifweni ezinzima, ungacabanga nje ukuthi yiziphi izinzuzo ezizoletha ezithombeni ezibuthakathaka.
Ososayensi nodokotela baye bafunda izindawo zokuphulukisa kahle kweoli futhi beza eziphethweni ezinjalo. Amafutha aqakathekile uma engenwa (hhayi ngendlela yawo ehlanzekile, yebo!) Awucubungulwa ngumzimba, kodwa unamathele egazini. Ukugeleza emzimbeni, igazi elinomthelela ophakeme wamafutha londla izitho lapho i-foci isifo ivele khona. Ngezinye izifo eziningi, odokotela bancoma futhi ukusebenzisa amafutha ashubile. Ukusetshenziswa kwamafutha abalulekile nganoma yiluphi uhlobo kuzothuthukisa inqubo yokutakula ezifweni ezifana ne-polyarthritis, i-osteochondrosis, i-radiculitis, i-myositis, i-neuralgia, izifo zesifazane nezidalwa, i-psoriasis nabanye.
Ngaphakathi, amafutha abalulekile angasetshenziswa kuphela kwifomu ehlanjululwe. Isixazululo akufanele sibe namaconsi angama-5 amafutha, ngosuku alukwazi ukudlula umthamo wezinhlapho ezingu-18. Amafutha abalulekile adonswa emzimbeni kanzima, kuthatha izinsuku ezimbili. Isilinganiso siyingozi kakhulu kubo, ngoba izinto ezinamandla kakhulu zigxile emafutheni. Uma ucabanga ukuthi lokhu kuhle, ama-microbes azobulala ngokushesha, ngakho-ke ayize! Amafutha amaningi aqukethe i-camphor, okuyinto ethinta kabi umsebenzi wenhliziyo.
Ukuze amafutha omfutho asebenze kangcono ngangokunokwenzeka emzimbeni obuthakathaka, kufanele kube kancane kancane (hhayi zonke izinsuku, nanoma yiluphi olunye usuku) ukwandisa inani lamaconsi, angadluli inani elivunyelwe kakhulu! Ngamaconsi amathathu ngomthamo owodwa kuze kufike ku-7 (ungaba ngu-10, kodwa udinga ukulawula ukushayela, uma izinga lenhliziyo likhuphuka okungenani imivimbo embalwa, udinga ukwehlisa umthamo bese ulandela isitofu - i-oyela ebalulekile ingaba njengelaxative).
Amafutha abalulekile amafutha abuye asetshenziswe uma kwenzeka isifo sezinsini, amazinyo ngesimo se-compress endaweni ebabazayo (amafutha awahlanjululwa). Ngamazinyo, cindezela ukugcina imizuzu engu-10, uma kwenzeka izinsini ezigulayo - nje ukuthutha.
Ukuze unciphise ubuhlungu emqaleni, ungakwazi ukugeza ngamanzi afudumele namafutha abalulekile (amaconsi ambalwa ilitha ngalinye). Ukubhoboza amafutha abalulekile esifubeni kukhuthaza ukuphola ngokushisa okukhulu, umkhuhlane.
Futhi ukubhoboza amafutha kusetshenziselwa ukukhulula ubuhlungu emisipha, amathambo ezifo ezihlukahlukene (isibonelo, sciatica, myositis).
Ngenhloso yokubuyisela emuva, i-tonic effect yamafutha e-fir, ukusetshenziswa kwayo ekugezeni, ezikhanyeni ze-aroma, kumakhandlela enamekayo awaziwa kakhulu phakathi kwabantu. Embhedeni wengeze nje amaconsi amafutha abalulekile, kodwa futhi uthele amagremu ambalwa e-emulsion (ungathenga ekhemisi).
Amafutha anamanzi ayingxenye yemithi eminingi, ikakhulukazi amafutha okugcoba, oklanyelwe ukubulala amagciwane esikhumbeni (izinyawo zonya, amathumba njll).
Indlela yokukhetha amafutha abalulekile e-fir
Ngokuvamile, kodwa itholakala ekuthengisweni kwamafutha omfutho ompofu. Kungabonakala ngombala ongenangqondo. Lokhu kusho ukuthi amafutha aphethwe kabi, futhi kukhona amanzi asele kuwo. Amafutha anjalo aqukethe izinto zokwelapha, kodwa ngobuningi obukhulu.
Eqinisweni, amafutha kufanele avule, akhanye, vumela ukukhanya kwemifino kudlule ngokwakho, cishe kungenakubala, okuluhlaza okwesibhakabhaka.
Iyiphi enye into engokwemvelo enomphumela ohlukile, osetshenziswa kakhulu, njengamafutha ase-fir? Ukusetshenziswa kwamafutha nakho okwenziwe ngamafutha, amakhemikhali asekhaya, njengokwelashwa. Zombili lapho futhi zinezinzuzo, zinikeza izinzwa ezihlukile zokuxhumeka kwemvelo.
Kuyini, i-melodrama enhle yaseRussia?
Nizhny Novgorod - netiyetha upopayi: umlando, repertoire, abaculi, New Year ukusebenza
Amahhotela Aphezulu e-Sharm El Sheikh